Mpitarika mpizahatany mankany amin'ny lapa sy Forts any Rajasthan
Nalaza eran'izao tontolo izao noho ny fisiany mijoalajoala sy ny maritrano manaitra, ny lapa ary ny forts any Rajasthan dia testamenta maharitra ho an'ny mpanankarena ao India lova sy kolontsaina. Miparitaka manerana ny tany izy ireo, ary samy manana ny tantarany manokana sy ny halehibeny mahatalanjona.
Nataon'i Tiasha Chatterjee
Maro amin'ireo lapa ireo, toa ny Lapan'i Umaid Bhawan, navadika ho toeram-pialan-tsasatra raitra ho an'ny mpizaha tany hiaina ao anatin'ny lova manankarena, ny hafa kosa misokatra ho anao mba hijerena ny fotoana efa lasa. Ireo lapa rehetra ireo dia nahomby tokoa tamin'ny fitazonana ny voninahiny taloha sy ny rafitra tsara tarehy.
Raha mbola mamiratra amin'ny hatsaran'ny Rajasthani Maharajas ny Amber Fort ao Jaipur, ny Fort Chittorgarh miparitaka manerana ireo hektara dia mbola manintona mpitsidika amin'ny tantaran'ny lasa lehibe. Noho izany, miomàna, toy ny ato amin'ity lahatsoratra ity dia hijery lalina ireo lapa sy rova ​​mijoalajoala ao Rajasthan isika ary hijery ny lasany mihaja!
Taloha fantatra amin'ny anarana hoe Jag Niwas, Lake Palace dia naorin'i Maharana Jagat Singh II teo anelanelan'ny 1743 sy 1746. Namboarina ho toy ny lapa fahavaratra ho an'ny mpanjaka Mewar Dynasty of Rajasthan, Izy io dia mirefy 4 hektara ao amin'ny nosy Jag Niwas, eo amin'ny Farihin'i Pichola, Udaipur.
Ny lapa dia natao hitodika amin'ny ilany atsinanana mba hahafahan'ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka Rajasthani hivavaka amin'ny Masoandro amin'ny vao mangiran-dratsy. Ny gorodona ao an-dapa dia voapetaka tsara marbra mainty sy fotsy miaraka amin'ny rindrina mipetaka amin'ny arabesque miloko marevaka. Ny lapa dia manana tantara manankarena manana anjara toerana lehibe tamin'ny fikomiana tamin'ny 1847, nanome fialofana ho an'ny fianakaviana Eoropeana maro izay nandositra an'i Nimach.
Tamin'ny 1971 dia natolotra ny Taj Hotels and Resorts Palaces ny lapa mba hanamora ny fikojakojana. Amin'izao fotoana izao, misy efitrano 83 ao amin'ny Lapan'ny Farihy ary nahazo laza ho iray amin'ireo lapam-pitiavana indrindra any India.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Janoary hatramin'ny Aprily, Oktobra ka hatramin'ny Desambra.
Ora misokatra - 9:30 maraina hatramin'ny 4:30 hariva.
Fantaro ireo daty manan-danja amin'ny e-Visa Indiana anao
Nianjera teo amin'ny iray amin'ireo lapan'ny mpanjaka indrindra any India, Ny Lapan'i Neemrana Fort dia malaza amin'ny toerana misy azy eo an-tampon'ny havoana avo, ka manome fomba fijery manaitra ny tanànan'i Alwar. Nivadika ho a trano fandraisam-bahiny manolotra fatram-piadanana ho an'izay mitady fialana amin'ny fahasahiranan'ny fiainana an-tanàn-dehibe.
Naorin'i Raja Dup Singh tamin'ny 1467 tany am-boalohany, ny anaran'ilay lapa dia avy amin'ny lehiben'ny faritra Nimola Meo, izay nalaza noho ny herim-pony sy ny herim-pony. Iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra ao amin'ny firenena ny Neemrana Fort Palace dia niova ho iray tamin'ny taona 1986. Ity lapa ity dia tsy maintsy tsidihina raha te-hahafantatra ny kolontsaina manankarena ao an-tanàna na mankafy fitsangatsanganana mirentirenty mankany Rajasthan.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - tapaky ny Novambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana martsa.
Ora misokatra - 9:00 maraina hatramin'ny 5:00 hariva.
Lapan'i Udai Vilas (Udaipur)
Raha i Udaipur no fijanonan'ny mpanjaka ao amin'ny fanjakana andriana, ny Lapan'i Udai Vilas dia iray amin'ireo lapa malaza indrindra ao an-tanàna. Miorina eo amin'ny Farihy Pichola, malaza amin'ny tranoben'ny lapa mahafinaritra ny fomba amam-panao nentim-paharazana sy ny endrika ara-javakanto marevaka.
Ny lapa dia voaravaka tsara tarehy amin'ny loharano midadasika, zaridainan'ny succulents ary tokotany manaitra, izay tsy maintsy hamela ny masonao sy ny fonao ho tanteraka. Vao haingana no novan'ny Oberoi Group of Hotels ho hotely lova ilay lapa.
Any amin'ny 27 kilometatra miala ny seranam-piaramanidina, ny Ny Lapan'i Udai Vilas dia voasokajy ho hotely fahadimy tsara indrindra eran-tany ary hotely tsara indrindra any Azia. Ny vahiny ao amin'ny hotely dia raisina amim-panajana ny mpanjaka ary manolotra sakafo matsiro avy amin'ireo chef izay nanana ny teo aloha nanompo ny fianakavian'ny mpanjaka.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Janoary ka hatramin'ny Desambra.
Ora misokatra - 12:00 hatramin'ny 12:00 sy 9:00 alina hatramin'ny 9:00 maraina.
Visa Indiana mpizahatany 5 taona ho an'ny olom-pirenena amerikana
Naorin'i Maharaja Udai Singh tamin'ny 1559, ny lapan'ny tanàna dia naorina ho renivohitry ny fianakavian'i Sisodia Rajpur. Ny fitambaran'ny lapa tokana dia ahitana lapa maro izay tafiditra ao anatin'ny manodidina azy. Any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Farihy Pichola dia miorina amin'ny fomba tena mavitrika sy mavitrika. Tsy manam-paharoa amin'ny endriny, ny lapa dia latsaka ao anatin'ireo lapa lehibe indrindra ao Rajasthan.
Ny maritrano dia fifangaroan'ny fomba nentim-paharazana Rajput mifangaro amin'ny fikitihana ny fomba Mughal ary eo an-tampon'ny havoana iray, dia manolotra anao ny fomba fijery panoramic ny tanàna miaraka amin'ireo rafitra mifanila aminy toa ny Neemach Mata Mandir, Monsoon Palace, Jag Mandir, ary ny lapan'ny farihy.
Ny zava-misy haingana momba ilay trano dia nampiasaina ho toerana fanaovana sarimihetsika ho an'ireo malaza James Bond sarimihetsika Octopussy.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Novambra ka hatramin'ny Febroary.
Ora misokatra - 9:00 maraina hatramin'ny 4:30 hariva.
Naorina tamin'ny 1798 avy amin'i Maharaja Sawai Pratap Singh, ny Hawa Mahal dia natao hitovy amin'ny satroboninahitry ny Tompo Krishna. Ao afovoan-tanànan'i Jaipur, ity lapa ity dia vita amin'ny vato fasika sy biriky mena ary latsaka ao anatin'ireo lapa malaza indrindra any Rajasthan. Na dia manana rihana dimy ivelany aza ny lapa, ny varavarankely kely 953 na Jharokhas dia natao tamin'ny endrika mitovy amin'ny toho-tantely misy toho-tantely.
Hawa Mahal dia midika hoe lapan'ny rivotra, izay famaritana tonga lafatra momba ny rafitry ny lapa. Amin'ny fampiasana ny effet venturi, ny famolavolana ny lapa dia miteraka fiantraikany amin'ny rivotra ao anatiny. Ny rafitra saro-takarina ihany koa dia nanomana ny tanjon'ny voaly, izay mamela ny vehivavy ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka hijery ny hetsika tsy tapaka eny an-dalambe tsy hita maso satria andrasana hanaraka ny fitsipika henjana momba ny rafitra fanakonana tarehy na Purdah izy ireo.
Ny Hawa Mahal dia manomboka amin'ny ampahany amin'ny Lapan'ny Tanàna ary miitatra hatrany amin'ny Harem Chambers na ny Zenana. Manoro hevitra anao izahay hitsidika ity lapa ity vao maraina satria ny loko mena ao amin'ny lapa dia lasa tena mamiratra sy mamiratra ao anatin'ny hazavan'ny masoandro maraina.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Oktobra ka hatramin'ny Martsa.
Fizotry ny fangatahana Visa India ho an'ny olom-pirenena amerikana
Deogarh Mahal (akaikin'i Udaipur)
Any amin'ny 80 kilaometatra miala ny sisin-tanin'i Udaipur, ny Deogarh Mahal dia naorina tamin'ny taonjato faha-17 ary niaina ho iray amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Rajasthan. Ny iray amin'ireo antony mahaliana indrindra momba ny Deogarh Mahal dia ny fitaratra mamirapiratra sy sary an-drindrina izay mipetraka manerana ny lapa. Voahodidin'ny farihy tsara tarehy iray izy io lapa romantika indrindra ao an-tanàna.
Eo an-tampon'ny Havoanan'i Aravali, ny Mahal dia manana tokotany midadasika izay feno karazan-javamaniry maro be. fialan-tsasatra mahafinaritra, jharokhas, tilikambo ary tilikambo. Ny fianakavian'i Chundawat no tompon'ilay lapa, izay mbola mitoetra ao an-dapa.
Ny lapa dia tanàna tsara tarehy iray izay miorina eo an-tampon'ny havoana iray, 2100 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Navadika ho hotely vakoka, manana efitrano tsara tarehy miisa 50 izy izao izay misy fitaovana maoderina isan-karazany toy ny gym, jacuzzi ary dobo filomanosana. Raha mandeha eo anelanelan'i Udaipur sy Jodhpur ianao, dia ny lapan'i Deogarh no toerana tsara hitsidihana azy.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Oktobra ka hatramin'ny fiandohan'ny Aprily.
Ora misokatra - 24 ora misokatra.
Fahasamihafana amin'ny fiteny any India
Namboarina tamin'ny fitambaran'ny Rajput sy Mughal fomba amin'ny haitao, ny lapan'i Jal mahal dia tena mahafinaritra ny maso. Araka ny hevitr'ilay anarana, dia eo afovoan'ny Farihin'i Man Sagar no misy ilay lapa. Ny lapa miaraka amin'ny farihy dia nandalo dingana fanarenana maro, ary ny farany dia natao tamin'ny taonjato faha-18 nataon'i Maharaja Jai ​​Singh II avy any Amber.
Sahala amin'ny Hawa Mahal, ny tranoben'ny lapa dia manana rafitra 5 misy rihana, fa ny efatra amin'ny rihana dia matetika mijanona ao anaty rano, isaky ny feno ny farihy. Ny terrace dia manana zaridaina mahafinaritra izay voahodidin'ny tilikambo semi-octagonal, miaraka amin'ny kaopy iray eo amin'ny zorony efatra. Nosy dimy koa no noforonina manodidina ny farihy mba hisarihana ireo vorona mpifindra monina.
Fateh Prakash Palace (Chittorgarh)
Ao anatin'ny sisin-tanin'ny Chittorgarh Fort Complex, izay koa ny fort lehibe indrindra any India, ny Lapan'i Fateh Prakash dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo ny ankamaroan'ny lapa lehibe ao Rajasthan. Noforonin'i Rana Fateh Singh, ity lapa ity dia eo akaikin'ny lapan'i Rana Khumba. Fantatra amin'ny anarana hoe Badal Mahal, ny Lapan'i Fateh Prakash dia naorina tamin'ny 1885 ka hatramin'ny 1930.
Ny ankamaroan'ny styling maritrano ny Mahal dia mitovy amin'ny fomba britanika phase mitambatra amin'ny kely Mewar style, miaraka amin'ny andohalambo cusped, efitrano lehibe ary toerana misy valindrihana avo. Ny firafitry ny dome goavam-be ao amin'ny mahal dia voarakotra asa stucco sokay saro-takarina sy akora simenitra sokay, manome endrika milamina nefa mahafinaritra. Mety hitovy amin'ny endriky ny fanorenana ity lapa ity amin'ny an'ny Durbar Hall ao amin'ny Lapan'ny tanànan'i Udaipur.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Septambra hatramin'ny Martsa.
Ny maha-tranon'ny Maharaja of Jaipur, Ity Mahal ity dia tonga miaraka amin'ny manokana tantara mahaliana. Naorina tamin'ny 1835 tamin'ny voalohany, ny trano voalohany an'ny Mahal dia noforonina ho a trano zaridaina, izay Maharaja Sawai Madho Singh nivadika ho a trano fihazana satria teo afovoan’ny faritry ny ala mikitroka no nisy azy.
Na dia taty aoriana aza tamin'ny taonjato faha-20 dia nitarina io trano fihazana fihazana io ary nanjary lasa lapa. Miaraka amin'ny fahaleovantenan’i India, ity lapa ity dia lasan'ny Governemanta Inde, ary tamin'ny taona 1950, ny fianakavian'ny mpanjaka dia nahatsapa fa lafo loatra ny fiampangana ny fikojakojana ity lapa ity.
Noho izany, tamin'ny 1957 dia nanapa-kevitra ny hanova ny lapa ho a trano fandraisam-bahiny.
Heverina ho latsaka ao anatin'ny hotely mirentirenty indrindra eran-tany, ity hotely ity dia eo ambanin'ny Taj Group of Hotels. Noho ny azy maritrano mahafinaritra, endrika saro-takarina, ary rafitra mahatalanjona, ity lapa ity dia tafiditra ao anatin'ny sokajy ny toerana fizahan-tany ankafiziny.
Lapan'i Jag Mandir (Udaipur)
Noforonina tamin'ny taonjato faha-17 ny Lapan'i Jagmandir ankehitriny lapa mpanjaka tranainy izay mirehareha amin'ny fanompoana ireo vahiny tamin'ny taonjato faha-21. Ny lapan'ny mpanjaka izao dia misy karazana fitaovana maoderina toy ny spa, trano fisotroana, trano fisakafoanana malaza eran-tany, ary trano fisotroana kafe mandritra ny andro, ka manolotra ny vahiny a traikefa mpanjaka izay mipetraka eo amin’ny manodidina ankehitriny.
Koa satria eo afovoan'ny farihy no misy ny lapa, dia tsy maintsy entina amin'ny sambo ny vahiny mba hahatongavana any Lapan'ny nosy Jagmandir. Ny hakanton'ny lapa dia nanome azy ny anarana hoe Swarg ki Vatika, na izay azo adika Zaridaina any an-danitra.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana - Aprily ka hatramin'ny Desambra.
Malaza manerana an'izao tontolo izao noho ny azy ireo haingo hatry ny ela ny maritrano, trano amin'ny antsipiriany, ary rafitra tsara tarehy sy be pitsiny, ny lapan'i Rajasthan dia porofon'ny harena ankibon'ny tany lova sy kolontsaina izay manana ny firenena. Saika tsy misy fomba tsara kokoa hialana sasatra amin'ny fahasahiranan'ny fiainana an-tanàn-dehibe noho ny fijanonana ao anaty ny halehiben'ny filaminam-piadanan'ny rova ​​sy ny lapan'i Rajsthan.
Noho izany, tonga ny fotoana hanitrika ny fanahinao ao amin'ny hatsaran-tarehin'i Rajasthan! Fenoy haingana ny kitaponao ary aza ajanona ao aoriana ny fakan-tsary! Hahita ny sasany amin'ireo toerana mendrika indrindra amin'ny fiainanao ianao ao anatin'ny atitany tsara tarehy amin'ny lova Marwari manankarena!